25-ka Ciyaarood ee Qolka Baxsashada ugu Fiican | I sii wakhti firaaqo
Isaac | 20/12/2021 14:55 | La cusbooneysiiyay 20/12/2021 16:06 | General
ka ciyaaraha looxa baxso Qolka Waxay ku salaysan yihiin qolalka baxsadka ah ee dhabta ah, taas oo ah, dejin ama xaalado leh mawduucyo iyo qolal kala duwan oo koox ka mid ah ka qaybgalayaashu ay ku xiran yihiin kuwaas oo ay tahay in ay xalliyaan xujooyin taxane ah oo ay helaan tilmaamo si ay u awoodaan inay qolka ka baxaan ka hor dhamaadka ciyaarta. Cimilada Ciyaar kor u qaadaysa iskaashiga, u fiirsashada, xariifnimada, caqli-galnimada, xirfadaha, iyo awoodda istaraatiijiyadeed ee mid kasta.
Guusha qolalkan ayaa sidoo kale caan ku ah ciyaaraha looxa ee noocaan ah, gaar ahaan masiibada kadib, maadaama qaar badan oo ka mid ah qolalkan ay xireen amniga, ama ay leeyihiin xaddidaad xagga kooxaha geli kara. Markaa waxaad ka ciyaari kartaa raaxada gurigaaga, iyo qoyska ama asxaabta oo dhan. Waxaa jira iyaga dhammaan dhadhanka iyo da'da ...
1 Ciyaaraha guddiga Baxsashada Qolka ugu fiican
1.1 ThinkFun's Escape Qolka: Sirta Dr. Gravely
1.2 Qolka Baxsashada Hawlgalka
1.3 Qolka Baxsashada Ciyaarta 2
1.4 Ka bax: Qasnadda Qulqulka ah
1.5 Fur! Adventures Geesinimo
1.6 Qolka Baxsashada Ciyaarta 4
1.7 Qolka Baxsada Ciyaarta Argagaxa
1.8 Qolka Baxsashada Ciyaarta 3
1.9 Qolka Baxsashada Ciyaarta: Jungle
1.10 Xisbiga baxso
1.11 La casa de papel - Ciyaar Baxsasho
1.12 Ka Baxso Qolka: Qarsoon ee Guriga Kormeerka
1.13 Ka Baxa: Golaha Laga Tagay
1.14 Ka bax: Carwada Argagaxa leh
1.15 Ciyaaraha Qarsoon: Kiis 1aad - Dambiga Quintana de la Matanza
1.16 Ka bax: Geerida Orient Express
1.17 Ka bax: Gurigii Xunnaa
1.18 Ka bax: Matxafka Dahsoon
1.19 Ciyaaraha Qarsoon: Kiis 2aad - Ciyaalka Casaanka ah
1.20 Ka bax: Qabrigii Fircoon
1.21 Ka bax: Shaybaadhka Qarsoon
1.22 Ka bax: Dhac ka dhacday Mississippi
1.23 Qolka Baxsashada Ciyaarta: Waqtiga Safarka
1.24 Room 25
1.25 Ka bax: Jasiiradda la ilaaway
2 Sida loo doorto ciyaarta Qolka Baxsashada ee ugu fiican
Ciyaaraha guddiga Escape Room ee ugu wanaagsan waxaa jira qaar magacyo soo jiita dareenka gaarka ah. Ciyaaro cajiib ah oo ku dhex gelinaya goob tafaasiil weyn leh oo aad maskaxdaada tuujin doonto si aad isugu daydo inaad xalliso caqabadaha:
ThinkFun's Escape Qolka: Sirta Dr. Gravely
ThinkFun 76311, baxso
Ciyaartan waxaa loogu talagalay qoyska oo dhan, maadaama ay tahay madadaalo saafi ah oo si fiican ugu habboon dhammaan da'da laga bilaabo 13 sano. Dhexdeeda waa inaad si wadajir ah ula shaqeysaa ciyaartoyda inteeda kale (ilaa 8) si aad u xalliso halxiraalaha, xujooyinka, oo aad u heshid tilmaamo aad isku daydo inaad xalliso sirta madow ee Doctor Gravely.
Soo iibso Sirta Dr. Gravely
Qolka Baxsashada Hawlgalka
Qalalaasaha - Hawlgalka Baxsashada
Ciyaar loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 6 sano jir. Waxay leedahay 3 heerar dhib ah, iyo taxane roulettes ah, furayaal, kaarar, qafis, saacad, qalabeeyaha tijaabada, iwm. Wax kasta oo lagu dhex galo oo lagu xalliyo caqabadaha xirfadda furaha, khabiirka kediska istiraatijiyadeed, wheel of nasiib, iwm.
Iibso Qolka Baxsashada Hawlgalka
Qolka Baxsashada Ciyaarta 2
Qalalaasaha - Qolka Baxsashada ee ...
Ciyaarta guddiga Escape Room ee dhammaan da'da laga bilaabo 16 sano. Waxay noqon kartaa 1 ciyaartoy ama 2 ciyaartoy, ujeedaduna waxay noqon doontaa in la xalliyo taxane tacabur iyo halxiraale, hieroglyphs, halxiraalaha, sudokus, ereyada isdhaafsiga, iwm. Con waxa uu leeyahay 2 tacabur oo kala duwan oo 60-daqiiqo ah: Jeel Island iyo magangalyo, iyo tacabur 15-daqiiqo ah oo dheeri ah oo la yiraahdo Afduub.
Ka bax: Qasnadda Qulqulka ah
Devir - Ka bax: Hantida ...
Ciyaarta guddiga Escape Room kaas oo qof kastaa ka qayb qaadan karo, laga bilaabo 10 sano jir iyo 1 ilaa 4 ciyaartoy. Ujeeddadu waa in aad naftaada ku dhex quusto safar fantastik ah si aad u hesho hantida weyn ee ku degtay moolka badda ee Santa María.
Iibso Qasnadda Dhufay
Fur! Adventures Geesinimo
Fur! Dhacdooyinka Halyeyga ah...
Ciyaarta nooca Qolka Baxsashada waxay soo bandhigaysaa ciyaarta turubka, iyadoo suurtogal ah in laga ciyaaro 1 ilaa 6 ciyaartoy, oo ku habboon qof kasta oo ka jira 10 sano. Muddada lagu qiyaaso in lagu xalliyo ciyaartan waa ilaa 2 saacadood. Tacabur ay iskaashiga iyo baxsashadu fure u noqon doonaan, in la xalliyo xujooyinka, furaha codes, iwm.
Iibso Halyeyga Adventures
Qolka Baxsashada Ciyaarta 4
Dhibaatada - Qolka Baxsashada ee ...
Ciyaarta boodhka qolka baxsashadu waxay ka kooban tahay 4 tacabur oo kala duwan oo lagu xalin karo wax ka yar 1 saac. Halxiraalayaal, hieroglyphs, halxiraalayaal, sudokus, ereyada isdhaafsiga, iwm. Iyada oo leh heerar kala duwan oo dhib ah iyo suurtogalnimada in lagu ciyaaro 3 ilaa 5 qof, laga bilaabo da'da 16. Marka laga hadlayo xaaladaha ay ka mid yihiin: Jebinta Xabsiga, Virus-ka, Tirinta Nukliyeerka, iyo Macbadka Aztec.
Qolka Baxsada Ciyaarta Argagaxa
Qalalaasaha - Qolka Baxsashada ee Labaad ...
Daabacaad kale oo taxane ah oo ciyaarahan ah oo ka badan 16 iyo 2 ciyaartoy. Caqabadaha, sida kan kore, waxaa lagu xallin karaa in ka yar 60 daqiiqo. Xaaladdan oo kale, 2 tacaburro argagax leh oo suurtagal ah ayaa lagu soo daray: Guriga Lake, iyo Gabadha Yar. Ma ku dhiiratay?
Qolka Baxsashada Ciyaarta 3
Mid kale oo ka mid ah xirmooyinka ugu xiisaha badan, oo leh suurtagalnimada in lagu ciyaaro 3 ilaa 5 dadka laga bilaabo da'da 16. Waxa ku jira wax kasta oo aad uga baahan tahay tacaburrada 4-saacadood ah ee ay ka kooban tahay: Dawn of the Zombies, Panic on the Titanic, Alice in Wonderland, iyo Cabbiraad Kale. Sida aad ka qiyaasi karto magacyadooda, mawduucyo kala duwan.
Qolka Baxsashada Ciyaarta: Jungle
Haddii aad raadinayso waxyaabo badan oo dheeri ah oo ku saabsan ciyaartan noocaan ah, halkan waxaa ah 3 tacabur kale oo cusub oo wax ka yar 1 saac. Iyada oo leh caqabado badan oo leh heerar kala duwan oo dhib ah. Xaaladdan oo kale, xaaladaha ay ku jiraan waxaa ka mid ah: Daanyeer Magic, Sting Mas, iyo Xariirka Dayaxa. Waxay sidoo kale ku habboon tahay 3-5 qof iyo +16 sano. Daabacaada Qoyska si aad u wada madadashaan.
Caanka ah - Xisbiga Baxsashada, ...
Ciyaarta nooca Qolka Baxsashada ee loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 10 sano jir. Waxaa la ciyaari karaa marar badan, mar walbana waa la yaab. Su'aalo badan iyo hal-xidhaaleyaal aad isku daydo inaad furaha hesho oo aad qolka ka baxsato inta kale ka hor. Waxay haysaa in ka badan 500 oo su'aalood: 125 halxidhaale, 125 aqoon guud, 100 halxidhaale ah, 50 mushkilado xisaabeed, 50 fakar ah iyo 50 caqabado muuqaal ah.
Iibso Xisbiga Baxsashada
La casa de papel - Ciyaar Baxsasho
Larousse - Aqalka...
Haddii aad jeceshahay taxanaha Isbaanishka ee ku guulaysta Netflix, La casa de papel, Qolka Baxsashada sidoo kale waa la ciyaaray. Gudaha waxaad ka mid noqon kartaa kuwa loo doortay inay fuliyaan tuuganimada qarniga ee Warshada Qaranka ee Mint iyo Stamp ee Madrid. Dhammaan jilayaasha iyo marxaladaha qorshaha waa in la raaco si loo helo bililiqada.
Iibso Guriga warqadda
Ka Baxso Qolka: Qarsoon ee Guriga Kormeerka
ThinkFun 76368, baxso
Ciyaartan kale ee taxanahan waxay u ogolaanaysaa ilaa 8 ciyaartoy inay ka qaybgalaan, da'doodu ka weyn tahay 10 sano. Halkan ciyaartoydu waxay isku dayi doonaan inay dhex maraan qolalka daartan dahsoon si ay u xalliyaan sirta, waayida cirbixiyeenkii halkaas ka soo shaqeeyay.
Ka iibso Mystery guriga dariska ah
Ka Baxa: Golaha Laga Tagay
Devir - Ka bax: aqalkii...
Goobta ciyaartani waa qol laga tagay, sida magacu tilmaamayo. Dhammaan waxa ku xeeran siraha. Ciyaarta looxa qolka baxsashada madadaalada ee dhibka sareeyo Da'da 12 iyo wixii ka weyn, iyo suurtagalnimada in keligiis la ciyaaro ama ilaa 6 ciyaartoy. Waxaa lagu qiyaasaa inay qaadan doonto inta u dhaxaysa 45 iyo 90 daqiiqo in la xaliyo.
Iibso Guryaha Laga Tagay
Ka bax: Carwada Argagaxa leh
Devir - Ka bax: Carwada...
Isla taxanihii hore, waxa kale oo aad haysataa Qolkan kale ee Baxsashada oo ku salaysan carwo cabsi leh, oo loogu talagalay kuwa doorbidaya nooca argagaxa. Waxaa lagu ciyaari karaa da'da 10 sano, iyo 1 ilaa 5 ciyaartoy. Ma aha mid fudud, waxayna qaadan kartaa inta u dhaxaysa 45 iyo 90 daqiiqo in la xalliyo.
Iibso carwada argagaxa leh
Ciyaaraha Qarsoon: Kiis 1aad - Dambiga Quintana de la Matanza
Muuqaalka Ciyaaraha Qarsoon ee...
Waxa jira dhawr kiis oo taxanahan ah ee Ciyaaraha Qarsoon, kuwaas oo mid ka mid ah loo turjumay Isbaanishka waa kiiskan ugu horreeya. Dareen sida baaraha kiiskan. Ciyaar kala duwan, oo leh fikrad cusub oo ka dhigaysa mid macquul ah. Gudaha waa inaad ka baartaa dukumeentiyada caddaynta, xaqiijiso alibis, oo aad ka saartaa gacankudhiiglaha. Waxay ciyaari karaan min 1 ilaa 6 ciyaartoy, ka weyn 14 sano, waxayna qaadan kartaa inta u dhaxaysa 1 saac iyo badh iyo 2 saacadood iyo badh in la xaliyo.
Iibso Kiiska 1aad
Ka bax: Geerida Orient Express
Devir - Ka bax: Dhimashada gudaha ...
Sheekooyin iyo filimaan ayaa laga sameeyay agagaarka magacan caadiga ah. Hadda waxa kale oo uu yimaadaa ciyaarta guddiga Escape Room kaas oo 1 ilaa 4 ciyaartoy oo da'doodu tahay 12 jir iyo ka weyn ay ka qayb qaadan karaan. Noocku waa qarsoodi, goobtuna waa tareenka khuraafaadka ah, kaas oo dil lagu geystay oo ay tahay inaad xalliso kiiska.
Dhimashada ka iibso Orient Express
Ka bax: Gurigii Xunnaa
Devir- Ka bax 11, The...
Weli cinwaan kale oo lagu daro taxanaha Bixinta. Loogu talagalay in ka badan 10 sano iyo 1-4 ciyaartoy, iyadoo suurtagal ah in la xaliyo caqabadaha ka dib 45 ilaa 90 daqiiqo. Sheekadu waxay salka ku haysaa guri qadiimi ah oo xaafadda ku yaal. Meel qarsoomay, daahsoon oo cidlo ah oo la dayacay. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa sanduuqaaga boostada laguugu soo qoray qoraal kaa codsanaya inaad aado halkaas, halkaas oo aad kula kulanto asxaabtaada. Gudaha gudaha iyo qurxinta si fiican loo ilaaliyo ayaa la yaab leh. Laakiin si lama filaan ah albaabku wuu xidhmay, waxa hadhayna waa in la isku dayo in la ogaado macnaha qoraalka.
Iibso Guriga Xumaanta
Ka bax: Matxafka Dahsoon
Devir - Ka bax 10, Matxafka ...
Qolkan Baxsashada waxay ku geynaysaa matxaf aad filayso inaad ka hesho farshaxanno farshaxan, farshaxanno, taallo, qalabyo, iwm, sida madxafyada kale. Laakiin madxafkan waxba ma aha sida ay u muuqato, waana inaad isku daydaa inaad baxsato, maadaama aad ku xayiran tahay dhismahan dahsoon.
Iibso Matxafka Dahsoon
Ciyaaraha Qarsoon: Kiis 2aad - Ciyaalka Casaanka ah
Si la mid ah kiiskii ugu horreeyay, laakiin kiiskan waxaad galaysaa baaritaan ku saabsan xatooyo dhaxal ah oo ka yimid qoys qani ah oo sharaf leh. Waxaa laga xaday madxafka Greater Borstelheim museum-ka, qoraaguna wuxuu ka tagay fariin dahsoon. Gaaffii koomiishinarri gaggeeffamaa jiru kana irratti xiyyeeffannoo guddaa qabu.
Iibso Kiiska 2aad
Ka bax: Qabrigii Fircoon
Devir - Ka bax: Qabriga ...
Ciyaartan waxay u ogolaataa 1 ilaa 6 ciyaartoy da'doodu tahay 12 iyo wixii ka wayn. Waxaa si gaar ah loogu talagalay kuwa jecel tacaburrada iyo taariikhda Masar. Sheekadu waxay ku salaysan tahay safarka Masar ee fasaxyada, halkaas oo aad booqato dhammaan noocyada kala duwan ee meelaha cajiibka ah, sida qabriga Tutankhamun, meel ay ku hareeraysan yihiin qarsoodi iyo ku dhawaad ​​sixir. Markaad gasho shaybaadhka mugdiga ah ee qaboojinta, albaabka dhagaxa ayaa xidha, oo aad ku xayiran tahay. Ma awoodid inaad baxdo?
Soo iibso qabrigii Fircoon
Ka bax: Shaybaadhka Qarsoon
Devir - Ka bax: The...
Ciwaanka kale wuxuu ku qaadanayaa sheeko adiga iyo saaxiibbadaa aad go'aansataan inaad ka qayb-gashaan tijaabo caafimaad. Marka la galo shaybaarka, meeshu waxay u egtahay mid faaruq ah, waxaana jira jawi qarsoodi ah. Gaas ayaa bilaaba inuu ka soo baxo tuubada tijaabada waxaadna bilaabaysaa inaad dareento wareer ilaa aad miyir beelid. Marka aad miyir qabtid, waxaad arkaysaa in albaabkii shaybaadhku xidhan yahay oo uu ku xannibay. Hadda waa inaad xallisaa hal-xidhaalaha si aad uga baxdo...
Iibso Shaybaadhka Qarsoon
Ka bax: Dhac ka dhacday Mississippi
Devir- Ka bax 14 Ciyaarta,...
Ciyaar kale oo heer sare ah, oo loogu talagalay qolalka Baxsashada ee ugu xirfadda badan. Waxaa la ciyaari karaa kaligiis ama ilaa 4 ciyaartoy, da'doodu ka badan tahay 12 sano. Magaca guridda, oo lagu dhejiyay doomaha caanka ah ee uumi, iyo tuuganimada dhexdooda. Beddelka weyn ama kaabida Orient Express.
Soo iibso dhac gudaha Mississippi
Qolka Baxsashada Ciyaarta: Waqtiga Safarka
Ciyaarta boodhka qolka baxsashada waxaa loogu talagalay dhammaan da'da laga bilaabo 10 jir, waxaana ciyaari kara 3 ilaa 5 ciyaartoy. Cinwaan ay ku raran yihiin halxiraalayaal, hieroglyphs, sudokus, ereyada isdhaafsiga, halxiraalayaasha, iwm, kaas oo lagu xallin karo wax ka yar 1 saac. Xaaladdan oo kale, waxay la socotaa 3 tacabur mawduuceedyo cusub oo diiradda lagu saaray safarka waqtiga: Waagii hore, Hadda iyo mustaqbalka.
Iibso Safarka Waqtiga
Asmodee- Qolka 25, ...
Horyaal loogu talagalay ciyaartoyda 13 jirka ah. Tacabur dhan oo ku salaysan mala-awaalka sayniska, mustaqbalka dhow halkaas oo ay jirto bandhig dhab ah oo loo yaqaan Qolka 25 iyo halka qaar ka mid ah khadadka cas la gooyo si ay isugu dayaan in ay helaan daawadayaasha. Musharixiinta waxaa lagu xiri doonaa dhismo ka kooban 25 qol oo leh saameyn khatar ah oo lama filaan ah taasoo gelin doonta tijaabada. Iyo, si loo adkeeyo baxsashada, mararka qaarkood waxaa jira ilaalo ku lug leh maxaabiista ...
Iibso qolka 25
Ka bax: Jasiiradda la ilaaway
Devir - Ka bax: jasiiradda ...
Tani waa waxtarka kale ee weyn ee taxanaha Bixinta. Habka Qolka Baxsashada ee tacaburka in ka badan 12 sano iyo suurtagalnimada in laga ciyaaro 1 ilaa 4 ciyaartoy. Caqabadda waxaa lagu xallin karaa ku dhawaad ​​45 ilaa 90 daqiiqo. Ciyaartan waxaad joogtaa jasiirad yar oo janno ah, laakiin markaad ogaato inay goori goor tahay oo aad ku baxsan doonto doon duug ah oo silsilado ah oo ay tahay in la sii daayo ...
Iibso jasiiradda la illoobay
Sida loo doorto ciyaarta Qolka Baxsashada ee ugu fiican
Waqtiga dooro ciyaarta looxa Qolka Baxsashada, waa muhiim in la eego dhowr astaamood, sida ciyaaraha kale:
Da'da ugu yar iyo heerka dhibka: Aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo da'da ugu yar ee ciyaarta miiska si dhammaan ciyaartoyda loogu talagalay ay uga qaybgalaan. Intaa waxaa dheer, heerka dhibtu sidoo kale waa go'aan, ma aha oo kaliya in kuwa yaryar ay ka qaybqaataan, laakiin sidoo kale waxay kuxirantahay kartida dadka waaweyn. Waxaa laga yaabaa in ay habboon tahay in lagu bilaabo magacyo ka fudud oo si tartiib tartiib ah loo helo kuwo kakan.
Tirada ciyaartoyda: Dabcan, sidoo kale waa muhiim in la go'aamiyo haddii aad rabto inaad kaligaa u ciyaarto, lammaane ahaan, ama haddii aad u baahan tahay ciyaarta guddiga Escape Room halkaas oo aad ku lug yeelan karto kooxo waaweyn.
Tiyaatarka: tani mar kale waxay noqotaa shay gaar ah, waa arrin dhadhan. Qaarkood waxay door bidaan mawduucyo argagax leh, kuwo kalena khiyaaliyada sayniska, laga yaabee in lagu dhejiyo filim ay taageere u yihiin, iwm. Maskaxda ku hay in inkasta oo ay isku dayaan inay dib u abuuraan waayo-aragnimada Qolalka Baxsashada dhabta ah, dhaqdhaqaaqyada qaar ka mid ah ciyaaraha guddigan ayaa isbedeli kara.
Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado qaar ka mid ah faahfaahinta Soosaarayaasha ciyaarahan, oo ogow mid kastaa waxa uu ku takhasusay, si aad u go'aamiso midka ugu fiican ee ku habboon baahiyahaaga ama dhadhankaada:
UNLOCK: astaanta ciyaarta looxa waxa ay nashqadaysay koobabkeeda iyada oo ka fakaraysa in ay abuurto waayo-aragnimo la mid ah Qolalka Baxsashada dhabta ah, iyada oo qolal lagu soo celiyay si dhab ah.
Exit- Calaamaddan kale waxay diiradda saartay caqabadaha maskaxda, halxiraalaha iyo sudokus ee u baahan in la xalliyo, waxayna u kala qaybisay heerar (bilaw, dhexe iyo sare).
Qolka Baxsashada Ciyaarta: taxanahani waa midka bixiya jawi wanaagsan iyo is-dhexgal, oo leh ciyaaro aad u faahfaahsan oo muuqaal ah, qalab, iyo xitaa apps mobile oo lagu dhejiyo dhawaaqyada ama muusikada asalka ah.
Ciyaaraha Hidde: waxaa loogu talagalay kuwa jecel nooca booliiska iyo dembiyada. Waxay ku yimaadaan baqshad kartoon ah oo aad mooddo inay yihiin kiis dil oo dhab ah, iwm, iyo meesha aad ka hesho wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u baadho oo aad u ogaato waxa dhacay.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Ciyaaraha guddiga Baxsashada Qolka ugu fiican
Ciyaaraha guddiga door-ciyaareedka ugu fiican